अझै फर्जी मत !- विचार - कान्तिपुर समाचार
अझै फर्जी मत !
मंसिर १८, २०७४ सम्पादकीय
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएसँगै मताधिकार हस्तक्षेप/दुरुपयोग गर्दै फर्जी मत खसाएका समाचार प्रकाशमा आइरहेका छन् । मतदान केन्द्रमा उपस्थित नभएको, मृत्यु भइसकेको व्यक्तिका नाममा समेत मत हालेको पाइएको छ ।
फर्जी मत रोक्नै भनेर फोटोसहितको अत्याधुनिक मतदाता परिचयपत्र लागू गरिए पनि अर्काका नाममा भोट खसाल्ने प्रवृत्ति नरोकिनु उदेकलाग्दो छ । यसमा सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा खटिएका निर्वाचन आयोगका कर्मचारी तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको लापरबाही जिम्मेवार देखिन्छ ।
मंसिर १० गते भएको पहिलो चरणको निर्वाचनमा औसत करिब ६५ प्रतिशत मतदान हुँदा बाजुरा, डोल्पा, रसुवा र हुम्लामा ८० प्रतिशत हाराहारी मतदान भएको थियो । अत्यधिक चिसो मौसम र युवा कामको खोजीमा भारत पसेका बेला भएको निर्वाचनमा पनि यतिका धेरै मतदान हुनु आश्चर्यजनक थियो तर मतदानपछि यसका कारण खुल्दै गएका छन् । बाजुरामा एकजनाले ६० भन्दा बढी मत हालेको पाइएको छ । उनीहरूले गाउँमा नभएका व्यक्ति तथा मतदान केन्द्रमै महिलाको मतपत्र लिएर आफैं छाप हानेका हुन् । मतदान केन्द्रमा ढिलो पुग्ने व्यक्तिको मत अगाडि नै अरूले हालिसकेको समेत भेटिएको छ । अधिकांश ठाउँमा राजनीतिक दलहरूले सहमति गरेरै फर्जी मत खसालेका थिए । कतिपय मतदान केन्द्रमा भने बलियो पकड भएको दलले निर्वाचन आयोगका कर्मचारीलाई धम्क्याएर फर्जी मत हालेको पाइएको छ । बाजुरामा फर्जी मत अधिक खस्छ भनेर शंका गर्ने आधार केही महिनाअघि भएको स्थानीय निर्वाचनको बदर मत प्रतिशत पनि हो । मतदाता शिक्षा सबैतिर नपुगेको र अलमिलनेखालको मतपत्र रहेको अवस्थामा पनि बाजुरामा ०.०१ प्रतिशत मत मात्र बदर भएको थियो ।
धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिकाअन्तर्गत सेर्तुङस्थित बोराङको मुक्राव देवी मावि मतदान केन्द्रमा ९९ दशमलव २६ प्रतिशत मत खस्नु आश्चर्यजनक छ । त्यहाँ मतदाता संख्या ८ सय १५ रहेकामा ८ सय ९ मत खसेको छ । जबकि मतदाता नामावलीमा रहेका १७ जनाको मृत्यु भइसकेको थियो र केही युवा विदेशमा छन् । बाजुरा र धादिङका यी दृष्टान्तले मतदान शान्तिपूर्ण हुँदैमा स्वच्छ र विश्वसनीय नहुने रहेछ भन्ने देखाएका छन् । मतदाता परिचयपत्र फोटोसहित दुरुपयोगले मत परिणाममै प्रभाव पार्छ । यो समग्रमा निर्वाचनमार्फत आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने लोकतान्त्रिक विधिको उपहास हो ।
निर्वाचनलाई स्वच्छ र विश्वसनीय बनाउनै निर्वाचन आयोगले मतदाता परिचयपत्र व्यवस्था गरेको हो । २०७० सालको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा पहिलोपटक फोटोसहितको सामान्य मतदाता परिचयपत्र लागू गरिएको थियो । प्रतिगोटा १० रुपैयाँ हाराहारी छपाइ खर्च भएको अहिलेको परिचयपत्रमा सुरक्षा प्रयोजनका लागि ‘क्यूआर कोड’ का साथै ‘भ्वाइड पेन्टोग्राफ’, ‘माइक्रोटेक्स्ट’, ‘वाटरमार्क’ समेत छन् । परिचयपत्रमा बाहकको फोटो, नाम, जन्ममिति, नागरिकता नम्बर र जिल्ला, बाबु–आमाको नाम, पति वा पत्नीको नाम, ठेगानाका साथै मतदान केन्द्र खुलाइएको हुन्छ । फोटोसहितको परिचयपत्र हुनाले मतदान केन्द्रमा खटिएका कर्मचारी तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले मतदातालाई सजिलै चिन्न सक्छन् । त्यसैले निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारी तथा राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिको गैरजिम्मेवार भूमिकाले मात्र फर्जी मतदान सम्भव हुन्छ । कुनै एउटा दलले पकड जमाएको ठाउँमा निर्वाचन कर्मचारीलाई डर देखाएर, धम्क्याएर फर्जी मतदान गरिएको हुन सक्छ ।
फर्जी मतदानले लोकतन्त्रलाई नै बदनाम गराउन सक्छ । त्यसैले नागरिकको मताधिकार दुरुपयोग/हस्तक्षेप नगरी/नगराई निर्वाचनलाई स्वच्छ र विश्वसनीय बनाउन सरकार तथा निर्वाचन आयोगले विशेष ध्यान दिनुपर्ने खाँचो देखिएको छ । मंसिर २१ गते हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनमा समेत फर्जी मत नखसोस् भनेर विशेष निगरानी अपनाउन अत्यावश्यक छ । फर्जी मत खस्न नदिएर निर्वाचनलाई मर्यादित र विश्वसनीय बनाउने दायित्व राजनीतिक दलहरूको समेत हो । निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक प्रभावकारी पार्नसके धादिङको रुबीभ्यालीमा जसरी मृतकका नाममा मत खस्न बन्द हुन्छ ।
प्रकाशित : मंसिर १८, २०७४ ०७:५९
चुनाव र देश
मंसिर १८, २०७४ अभि सुवेदी
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको अन्तिम ऐतिहासिक निर्वाचनमा भोट दिन असुरक्षा र उत्साहबीच २१ मंसिरमा जाँदैछौं । अनेक वैचारिक कुरा उठेका छन् । धुमिल प्रतिज्ञा सडक, भित्ता र गल्लीहरूमा छरिएका छन् ।
प्रतिज्ञाको अनौठो चरित्र हुन्छ । पूरा भएनन् भने तिनले राजनीति नै उपहासपूर्ण बनाउँछन् ।
त्यस्तै चुनावमा ठूलो धनराशिको प्रयोग हुनथालेको छ । समयमा रोकिएन भने त्यसले भ्रष्टाचारलाई वैधानिक चरित्र दिनेछ । होस पुर्‍याइएन भने कसरी एउटा सम्पन्न र महत्त्वपूर्ण देश पनि कङ्गाल हुनेरहेछ भन्ने ‘न्यारेटिभ’ हो, यो लेख । यो अफ्रिकी देश जिम्बाब्वे र यसका शासक रबर्ट मुगाबेको कथा हो । राजनीतिमा प्रयोग, प्रयास र प्रतिज्ञाको तिरोधान भएको कथा हो, यो । संविधानभित्रै चलेको राजनीतिले पनि कसरी ‘डिक्टेटर’ जन्माउँछ भन्ने इतिहास हो ।
जिम्बाब्वेका अधिनायकवादी शासक रबर्ट मुगाबेको ३७ वर्ष निरंकुश शासन नाटकीय ढंगले यही नोभेम्बरको अन्तिम साता समाप्त भएपछि अनेक चर्चा भए । पुराना मित्र र उपराष्ट्रपति कमरेड इमर्सन मनन्गाग्वालाई हटाएर आफूभन्दा ४१ वर्ष कान्छी पत्नी कमरेड गुच्ची ग्रेसलाई आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउने मुगाबेको विचारलाई उनका मुक्तियोद्धा मित्रहरू र सैनिकले मानेनन् र उनलाई अपदस्थ गरेर मनन्गाग्वालाई राष्ट्रपति बनाए ।
हरारेका सडक, वास्तुकला जताततै राखिएको हरियो चौरभरि मानिस पागलजस्तै भएर खुसीले रुने र हाँस्ने गर्दै नाचेका दृश्य टीभीमा देखिए । यी ठाउँ परिचित देखिए । मण्डला बुक प्वाइन्टका माधवलाल महर्जन र म किताब प्रदर्शनी र ‘अफ्रिकी डिस्कोर्स अनि डायस्पोरामा रचिएको अफ्रिका’ विषयको सम्मेलनमा भाग लिन हरारे गएका थियौं । अगस्ट ४, २००४ का दिन मेरो कार्यपत्र थियो ।
माधव र मैले त्यो हरियो चौरको ढुङ्गाका वास्तुकला गाडेको परिवेशमा ३ अगस्ट २००४ को दिन हाम्रा किताब प्रदर्शन गरेर राख्यौं । स्कुल र कलेजका युवक–युवती एकछिन स्टलहरू अगाडि नाचेर अन्तै जान्थे । एउटा मुखभरि रङ्ग दलेको मानिस पहिला नाच्दै र उफ्रिँदै आउँथ्यो, अनि उसको पछिपछि स्कुले केटाकेटीलाई भट्याउन लगाउँदै अर्को आउँथ्यो ।
भट्याउनेले भन्थ्यो, ‘ब्रिदिङ ब्रिदिङ’, केटाकेटी त्यही भन्थे । भट्याउने भन्थ्यो, ‘एनिह्वेर–एनिह्वेर’, ‘एनिटाइम–एनिटाइम’, केटाकेटी पनि त्यही दोहोर्‍याउँथे । मलाई नेपालमा देउसी खेलेजस्तो लाग्यो, त्यो । माधवले सुनेछन्, ‘मुगाबे चोर, देश छोड् !’ उनले त्यसोभन्दा म खुलेर हाँसेँ, तर विचारमा मग्न माधवको मुड देखेपछि म पनि त्यस्तै सुन्न थालेँ । गम्भीर भएँ । लाग्यो, हाम्रो मनभरि त्यही ‘देश छोड्’को नाराको ध्वनि बसेको थियो । नेपालमा त्यो बेलासम्म हामीले धेरैलाई देश छोड् भनिसकेका थियौं ।
एकाध वर्षपछि भयानक रूपले देश छोड् भन्ने नारा घन्कायौं । कसैले देश छोडेनन् । तर त्यसको अर्थ थियो, शासन छोड् ! नेपालमा शासन छोडे, राजाले । मुगाबेले छोडेनन् । भर्खरै मुगाबेको शासन अन्त्य भएपछि अहिले सम्झिन्छु, त्यो नारा । युवा दौंतरी समाजमा त्यहाँ काम गरेर बसेका रवीन्द्रमान शाक्यसँग भेट भयो । मैले यो कुरा उनलाई सुनाएँ । तिनले भने, ‘मुगाबेले कहिल्यै छोड्दैनन्, देश ।’
मुगाबेले देश छोडेका छैनन्, तर ९३ वर्षको उमेरमा ३७ वर्ष एकछत्र शासन गरेर शक्ति छोड्न उनी बाध्य भए । नोभेम्बर १६, २०१७ को ब्रिटेनको ‘इकोनोमिक्स’ पत्रिकाले मुगाबेलाई प्राचीन रोमका कठोर शासक कालिगुलासँग तुलना गरेर लेख लेख्यो । इशाको पहिलो शताब्दीको सुरुमा ४ वर्ष शासन गरेका यी रोमन बादशाह अति निरङ्कुश भनेर चिनिन्छन् ।
उनको नाममाथि फ्रान्सेली लेखक अलबेर क्यामुले ‘कालिगुला’ शीर्षककै नाटक लेखेका छन् । यसमा उनको संवेदनाहीन चरित्रको नाटकीकरण भएको छ । ‘इकोनोमिक्स’ पत्रिकाले लेख्यो, ‘कालिगुलाले आफ्नो घोडालाई रोमको विधानले दिने मेजिष्ट्रेट वा कन्सल बनाउन चाहेजस्तै मुगाबेले आफूभन्दा त्यति धेरै कान्छी पत्नी गुच्ची ग्रेसलाई आफ्नी कन्सल सदृश शक्तिपात्र बनाएका थिए ।’
तर पत्रिका भन्छ, ‘विचरा कालिगुलाको घोडाले कुनै मोडल केटीलाई बिजुलीका तारले हानेर चोट लगाएन । रोमनबासीमा भोकमरी चलेको बेला भयानक खर्चिला सामान खरिद गर्न त्यो घोडा निस्केन ।’ ग्रेसको आलोचना हो, त्यो तुलना । मुगाबे र ग्रेसको तुलना माओ र उनकी उमेरले धेरै कान्छी पत्नी चियाङसँग गर्दैछन्, जिम्बाब्वेका मानिस, आजकाल । माओ ८२ वर्षको उमेरमा मरेपछि चियाङ र अरू तीनजना उनका कमरेडहरू जेल परे । चियाङ सायद जेलमै मरिन् । तर मुगाबेको लामो शासनको दोष एउटी नारीलाई दिएर बिसाउन सजिलै सकिँदैन ।
एउटा प्रसङ्ग सम्झिन्छु । जिम्बाब्वेको पहिलो नाम रोडेसिया भएको बेलाको कुरा हो । इयान स्मिथ नामका गोरा यसका प्रधानमन्त्री थिए । लन्डनमा सन् १९७९ मा मुगाबे र उनका सहयोद्धा अर्को जातिका जोसुवा एन कोमो भन्ने वार्ता गर्न आएका समाचार सर्वत्र आउँथे । म त्यो बेला एडिनबरा विश्वविद्यालयमा पढ्थेँ ।
टीभीमा यी मुगाबेलाई हेर्न र उनले बोलेको सुन्न मलाई असाध्यै मनपथ्र्यो । मुगाबे मार्गरेट थ्याचरलाई सोझै गाली गर्थे । यत्तिकी शक्तिशाली, मेरो छात्रवृत्ति खोस्ने, ठाडो बोल्ने महिलालाई अंग्रेजीमा तँतँ–ममजस्तो भाषामा उनले गाली गरेको सुनेँ, एक दिनको समाचारमा । चकितै भएँ । मुगाबेको विषयमा खोजेर पढें । उनी क्रान्तिकारी थिए । उनी नेल्सन मण्डेला हुन् कि भन्नेजस्तो लाग्थ्यो । एन कोमो पनि त्यत्तिकै क्रान्तिकारी थिए । त्यहाँ भएको सम्झौता अनुसार नै जिम्बाब्वे मुक्त देश भयो । मुगाबेले १९८० को चुनाव जिते । गोराहरूसँग पनि मण्डेलाले जस्तै व्यवहार गरे अनि सबै मिलेर देश बनाउने हो भने ।
तर उनलाई शक्तिको मात चढ्दै गयो । उनी आफ्नो शासनको आलोचना गर्नेलाई दबाउनेपट्टि लागे । एन कोमो पाखा लागे । पछि उनको मृत्यु भयो । जिम्बाब्वेको दोस्रो ठूलो जातिलाई दबाउन मुगाबेले उत्तर कोरियामा तालिम दिलाएको पाँचौं ब्रिगेड भनिने पल्टन प्रयोग गरे र धेरैको हत्या गरे । पैसा सकिँदै गएपछि मुगाबेले गोरा किसानका फार्महरू कब्जा गरे, अनि आफ्ना मान्छेलाई बाँडे । उनले आफूलाई एक सोसलिस्ट शासकको रूपमा राख्दा सजिलो हुने देखे । समाजवादी शब्दको दुरुपयोग गरे । सबै उनको जानु पीएफ पार्टीका नेता, मन्त्री, पुराना मुक्ति योद्धालाई कमरेड भन्नुपर्ने बनाए । माधव र मलाई एउटा रेष्टुराँमा खाजा खाइरहेका एकजना जिम्बाब्वेकै गोरा मानिसले नेताहरू जतिका नाम लिँदा सबैलाई कमरेड भनेको अनौठो लाग्यो ।
उठ्ने बेला तिनले भने, ‘यो मेनुमा लेखेको दाम देखेर ढुक्क नपर्नु, तिमीहरू उठ्ने बेला यो बढिसक्छ ।’ नभन्दै हामीले बिल तिर्ने बेला दाम बढिसकेको थियो । जाने बित्तिकै आयोजकले हामीलाई जनही १६ लाख डलरका दुइटा बिटा दिएकोमा चकित परेका थियौं । त्यही बन्डलबाट किताब प्रदर्शनीमा मैले चार लाख एक्काइस हजार डलरमा ‘मार्भेलस अफ दी अफ्रिकन वल्र्ड’ (२००३) अथवा अफ्रिकी जगतका भयानक उपलब्धि नामको ढड्डु किताब किनेँ । मेरो प्रियग्रन्थ हो, यो ।
मुगाबेले संविधानको उल्लङ्घन गरेनन्, तर त्यसको नराम्ररी प्रयोग गरे । एक पटक शक्तिमा आएपछि उनका कमरेडहरूको शासन सुनिश्चित गर्न, अकुत धन जम्मा गर्न र आम जनतालाई भोकै र पीडित बनाएर राख्न र आफू र आफ्ना क्रोनीहरूलाई धनी बनाउन संविधानकै प्रयोग गरे, उनले । यो धनी देशका हीरा–मोतीका खानीहरू शक्तिमा आसिन कमरेडहरूले सबै लुटे ।
भ्रष्टाचार खुला कर्म भयो, उनीहरूको, जसको प्रयोग उनीहरूले विना संकोच गरे । अरूले चुनाव उठे र जित्ने जस्तो भयो भने (विरोधी दलका मोर्गन चेङ्गराईको उदाहरण छ) तिनलाई दु:ख दिएर भए पनि हतोत्साही बनाए मुगाबेले, तर संविधान भने मिचेनन् । कमरेडहरूको शासन चलिनै रह्यो । देश कङ्गाल भयो । विदेशी लगानी गर्नेहरू तर्सेर भागे । मुगाबे राष्ट्रपति भएको बेला अफ्रिकाको यो हीरा देश उनको भ्रष्ट र शासन नछाड्ने चेतनाले गर्दा बिजोग भयो । मुगाबेले ठिक–ठिक समयमा चुनाव गराए, तर शक्तिमा आफू र आफ्ना नक्कली समाजवादीहरू आउने बाटो भने छोडेनन् ।
देशका चुनाव र संविधान मात्रले राज्य लोकतान्त्रिक हुँदैन भन्ने बलियो उदाहरण मुगाबेको जिम्बाब्वे भयो । त्यो देशका मानिस अति उज्याला, पठित र बुद्धि भएका रहेछन् । ‘डिक्टेटर’ले संविधानको बाटोबाटै आएर कसरी त्यस्ता जनतामाथि शासन जमाएर दु:ख दिनेरहेछ भन्ने देख्दा आश्चर्य लाग्छ । मुगाबेका बाहिरी हिरोहरू अधिनायकवादी थिए ।
उनलाई त्यस्ता मोडलबाट देशमा विद्रोही दबाउन अनि देश कङ्गाल बनाएर आफू र कमरेडहरू धनी हुन मद्दत मिल्यो । १ करोड ७० लाख जनसंख्या भएको देशका ५० लाख योग्य नरनारी दक्षिण अफ्रिका र अन्तै लागे ।
नेपालका सबै दल लोकतान्त्रिक हुन्, तर उर्लँदो भ्रष्टाचारलाई छोप्न तिनीहरूरूका सरकार र क्रोनीहरूले भोलि संविधान प्रयोग गरे भने नेपालको हालत जिम्बाब्वेको जस्तो हुन बेर लाग्ने छैन ।